Creative Writing » Top (5) july 2016 Movie	10
kai says: သာမန်အားဖြင့်… အမေရိကားရဲ့နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဖြစ်တဲ့.. ဇူလိုင်မှာ ကားအကောင်းစားတွေ စုပြုံတင်တယ်..။
အောင် မိုးသူ says: အဲ့လိုတွေ ရှိတယ်ပေါ့။
kai says: အမေရိကန်တွေ.. ရုပ်ရှင်ရုံမှာ သွားကြည့်နှုန်း သိရင်အံ့သြသွားမယ်..။
အောင် မိုးသူ says: ဒီမှာလည်း ကြည့်ကြပါတယ် သူကြီးရဲ့။ ဟိုမှာတော့ ပိုတိုးတက်တာပေါ့နော်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အော် . . . အဲလိုလား . . July ထဲ ပိုက်ပိုက်ပိုကုန်တော့မယ်လို့ တွေးနေတာ . . .
ခင်ဇော် says: တစ်ကားမှ မမက်မောမိသေးးး
အောင် မိုးသူ says: Light Out, The Purge, The Secret life of pet
Thint Aye Yeik says: Light Out ကြည့်ချင်သည်
တောတွင်းပျော် says: ဟိုတုန်းကလို့ဗွီဒီယိုရုံခေတ်မျိုးသာဆို
အောင် မိုးသူ says: ဖြစ်ရမယ်